Kismaayo News » Baledweyne, xaruntii Baraaraha oo la booqday
Baledweyne, xaruntii Baraaraha oo la booqday
Kn:Magaalada Baledweyne, halkii ay ku barbaartay Beerlula, xarunta Gobolka Hiiraan ayaa maanta marti galisay wafuud ka socotay dalka Jabuuti.
Wasiirka Gaashaandhigga dalka Jabuuti, Cabdikariin Maxamed, abaanduulaha ciidamada iyo saraakiil kale oo darajadoodu hoosayso ayaa maanta si aan lasii shaacin oo kadis ah uga degay garoonka diyaaradaha ee Ugaas Khaliifa.
Waftiga oo markii danbe loo qaaday xarunta taliska ee ciidamada Jabuuti ayaa garoonka waxaa ku soo dhaweeyay mudane Cabdifatax Maxamed Afrax oo ah masuulka ugu sareeyay maamulka Gobolka Hiiraan, siyaasiyiin, saraakiil iyo oday dhaqameed ay kamid ahaayeen duubabka ugu caansan gobolka.
Waftiga ka socday Jabuuti ayaa kasokow u kuurgalista xaaladda amaan iyo tan nololeed ee ka jirta degmada Baledweyne ayaa waxaa ugu weyneyd mooraal dhiska ciidamada gaaraya shanta boqol ee halkaasi ka jooga.
Wali gobolka waxaa ku sugan ciidamadii Itoobiyaanka ee qabtay, waxaana la sugayaa inay dawladda Jabuuti soo dhamaystirto ciidamo ku filan oo hanan kara sugista amaanka gobolka ka hor inta ayna bixin ciidamada Itoobiyaanka.
Magaalada Baledweyne ayaa ka soo duudsanaysa fatahaaddii wabiga Shabeele ee kal horay harqisay magaalada.